Road to Freedom: 11/1/07 - 12/1/07
News collection - AIDS monastery ordered shut in Myanmar
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရန် မတ္တရာအဖွဲ့ချုပ်တောင်းဆို link
- မိုးကုတ်မတိပဌာန်စာသင်တိုက်ကို စစ်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်များ ပိတ်ဆို့ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းသိမ်းပိုက်သည့်အပေါ် မဇ္ဇျိွမမှဆရာတော်ကြီးများ၏ သဘောထား link
- ငွေလဲနူန်းနဲ့ ကုန်ဈေးနူန်းနောက်ဆုံးအခြေအနေ link
- ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုဌေးကြွယ်ဖမ်းခံနေရစဉ် မိခင်သေဆုံးပြီ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းချိန်ပိတ်ခံရသည့်အပေါ် အမျိုးသားကောင်စီရူတ်ချ link
- နအဖ စစ်တိုင်းမှူးရာထူးများ အပြောင်းအလဲလုပ် link
- ဝ’ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးက ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုလား link
- ကေအန်ယူကို နအဖ က ထိုးစစ်ဆင်တော့မည် link
- သံဃာတော်သေဆုံးမှု နှင့်မသက်ဆိုင်ဟု ကေအန်ယူငြင်းဆို link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းသံဃာတော်များကို လက်မခံရန် အခြားကျောင်းတိုက်များကို အာဏာပိုင်များအမိန့်ပေးထား link
- မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကြီးနှင့် သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးနေထိုင်စရာ အခက်အခဲဖြစ်နေ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းချိတ်ပိတ်ခြင်း တခြားဘာသာဝင်များအတွက်ပါစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာဟု ပီနမ်ဆရာတော်မိန့်ကြား link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ချိတ်ပိတ်ခြင်း မြန်မာအစိုးရ အပြောနှင့်အလုပ်မညီဟု ဂမ်ဘာရီဝေဖန် link
- ကွယ်လွန်သူမိခင်ဈာပနပို့ခွင့်ရရေး စစ်အစိုးရကို ကိုဌေးကြွယ်မိသားစု တောင်းဆို link
- စက်တင်ဘာဆန္ဒပြပွဲများတွင် တကယ်တမ်းပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ရုံးတင်တရားစွဲခံရသူများရှိ link
- သီးလေးသီးကို အလုပ်ဖြုတ်ပြီးမှ ပြန်ခန့်ရန် ဝန်ကြီးဌာနကြိုးပမ်း link
- ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်၏ မိခင် ကွယ်လွန် link
- ရှမ်းပြည် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး စစ်ဆေးမှုကို အာဏာပိုင်များ ဖုံးကွယ်ထား link
- ရှမ်းပြည်နယ်၌ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ link
- ကေအန်ယူကို ထိုးစစ်ကြီးဆင်ရန် နအဖတပ်များချီတက်လာ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းချိတ်ပိတ်ခံရသဖြင့် ဖဲကြိုးနီ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါသည် ကူညီစောက်ရှောက်မူလုပ်ငန်းများထိခိုက် link
- ဂမ်ဘာရီ၏အာဆီယံဒေသတွင်းခရီးစဉ်များနှင့်သုံးသပ်ချက် link
- ဒီမိုကရေစီလူပ်ရှားမူများကို ဖမ်းဆီးမူများမရပ်နိုင်သေး link
- ဘုရားသုံးဆူ မယက ဥက္ကဌသေနတ်ဒါဏ်ရာပြင်းထန် link
- AIDS monastery ordered shut in Myanmar, link
- UN envoy criticises continued Myanmar detentions, repression, link
- Cambodia urges Myanmar to continue Suu Kyi talks, link
- Myanmar junta shuts AIDS monastery, link
- Burma Shuts Down Monastery Allegedly Linked to Protests
- Myanmar PM visits Cambodia amid pressure over protest crackdown, link
- Rebel Philippine Soldiers Peacefully End Manila Hotel Takeover, link
- Total plans work on installations in Myanmar, link
- ဗုဒ္ဓဂါယာ ၄ ရက်ကြာ ထိုင်သပိတ် အဆုံးသတ် link
Posted by Nyein Chan Aung at 4:55:00 PM0comments
အမေရေ... (လူထုဒေါ်အမာ မွေးနေ့အတွက် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ ကဗျာ)
Posted by Nyein Chan Aung at 12:36:00 PM2comments
Labels: The others' poem
News collection - လူထုဒေါ်အမာ (၉၂) ပြည့်မွေးနေ့၊ မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ချိတ်ပိတ်ခံရ၊ ဂမ်ဘာရီ ကမ္ဘောဒီးယားရောက်
လူထုဒေါ်အမာ (၉၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံမှာကျင်းပ
ဓါတ်ပုံ - ဧရာဝတီ
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ကို စစ်အာဏာပိုင်တို့က ချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီ သံဃာတို့နေရာမဲ့ကုန် link
- ကေအန်ယူ၏ပစ်ခတ်မူကြောင့် ဘုန်းကြီး (၂) ပါးနှင့် အမျိုးသမီး တယောက်သေဆုံးဟု မြန်မာ့အလင်း၌ဖော်ပြ link
- ကေအန်ယူကို နအဖတပ်များ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေ link
- ဆန္ဒပြပွဲများတွင် အဖမ်းဆီးခံထားရသူ (၄) ဦး၏ အယူခံနောက်ဆုံးအခြေအနေ link
- ထိုင်း၊ ဂျပန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများ၌ လူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပ link
- လူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့ပွဲ တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်း၌ကျင်းပ link
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပေါ်ပေါက်ရေး သာစည်အဖွဲ့ချုပ်တိုက်တွန်း link
- ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြင့်မောင် ဖမ်းဆီးမူအခြေအနေ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက် ချိတ်ပိတ်ခံရသည့်အပေါ်သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ကန့်ကွက် link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ကို ချိတ်ပိတ်ခံရ ဆရာတော်ကျိန်းစက်ရန်ပင်နေရာမရှိ link
- စည်းလုံးညီညွတ်ကြရန် (၉၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့၌ လူထုဒေါ်အမာ တိုက်တွန်း link
- လူထုဒေါ်အမာ မွေးနေ့ မဟာဂန္ဓာရုံမှာကျင်းပ link
- ဒီမိုကရေစီရေးလူပ်ရှားသူတွေကို အာဏာပိုင်များမှ ဆက်လက်ဖမ်းဆီး link
- လက်ကိုင်ဖုန်းများ ကြားဖြတ်နားထောင်ရန် စစ်အစိုးရ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် link
- တောင်သူများ၏ ၀ါပဲနှင့်ဥယျာဉ်မြေများ၌ စပါးအဓမ္မစိုက်ခိုင်း link
- ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကုလမှ မြန်မာ့အရေး ကြားဝင်မူကို ကြိုဆို link
- ဂမ်ဘာရီမြန်မာ့အရေးအတွက် ကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆွေးနွေး link
- နမခ တိုင်းမူးနေရာ၌ဗိုလ်မူးချုပ်မြင့်စိုးကို ခန့်အပ် link
- လိူင်သာယာစက်မူဇုံမီးလောင် link
- Writer Ludu Daw Amar's Birthday Celebrated in Mandalay, link
- Maggin Monastery Shut Down by Security Forces, link
- ဘုရားသုံးဆူမြို့ မယကဥက္ကဋ္ဌ သေနတ်ပစ်ခံရ link
- ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ သံဃာတွေကို ထောက်ထားပြီး စာမေးပွဲမဖြေကြဖို့ သံဃာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့တိုက်တွန်း link
- နိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ် စာရေးဆရာမကြီးလူထုဒေါ်အမာ မွေးနေ့ပွဲသို့ ဆုတောင်းသ၀ဏ်လွှားများပေးပို့ link
- လူထုဒေါ်အမာ (၉၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မိတ်ဆွေတပည့်များရဲ့ ပြန်ပြောင်းပြောဆိုချက်များ link
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီး သေဆုံးမှုစာရင်း စစ်အစိုးရပြောတာထက် ပိုများဟု ပီညဲရိုးပြော link
- ရှမ်းပြည်နယ်၌ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးစတင်ဖြစ်ပွား link
- ရွာသားနှစ်ဦးကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်သည့်အပေါ် ရခိုင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံးက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရူတ်ချ link
- Gambari arrived to Cambodia, link
- Ludu Daw Ahmar, Burma's most renowned literary figure will celebrate her 92nd. birthday on November 29th, link
- U.N. Human Rights Investigator Doubts Burmese Government Figures on Detainees, link
- Bush Meets with Abbas, Olmert, Says Tough Talks Lie Ahead, link
- China and EU Meet for Annual Summit to Talk Trade, link
- Pakistan's Musharraf Steps Down As Army Chief, link
- Pinheiro doubts Burma’s official figures of political prisoners, link
- စစ်ရေးစွက်ဖက်ရန် ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်နေ (ဆောင်းပါး) link
- မဂ္ဂင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အပိတ်ခံရ link
- သီးလေးသီး အလုပ်ဖြုတ်ခံရ link
Posted by Nyein Chan Aung at 2:50:00 PM0comments
တိုက်ပွဲများနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေပါစေ” 2
ငါတို့ လက်သီးလက်မောင်း တန်းလိုက်ဖို့
(ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (၂) လပြည့်အမှတ်တရ)
၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
1. နိုင်ဝင်းဆွေ၊ ငွေ ရွှေ ရတု၊ ရေဆန်လမ်းသို့အပြန်
2. ကိုကိုးကျွန်း (၅၃) ရက်ကြာအစာငတ်ခံတိုက်ပွဲများအတွင်း ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော်မောင်မောင်စိုး၏ တိုက်ပွဲခေါ်သံ၊ ကားမာက်စ်၏ အထ္တုပ္ပတ္တိထဲမှစာသား
Posted by Nyein Chan Aung at 8:55:00 PM5comments
- တိုင်းပြည်တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ကြဖို့ လူထုဒေါ်အမာတိုက်တွန်း link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ကို အာဏာပိုင်တွေအတင်းပိတ်ခိုင်းတာ ဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီ link- ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သံဃာတွေအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု တောင်းဆို link
- စစ်အစိုးရက ကျင်းပမယ့် ပထမပြန်စာမေးပွဲ မဖြေဆိုမယ့် သံဃာတွေများပြား link
- မြန်မာပြည်အတွင်း ဖမ်းဆီးဖိနှပ်ခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် မြန်မာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးလှုပ်ရှား link
- ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ဥပဒေကျောင်းသူ ရဲတပ်ရင်းမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက် link
- အဖမ်းခံရသူ ကိုအောင်ဇော်ဦးနေအိမ်ကို အာဏာပိုင်များ မွှေနှောက်ရှာဖွေ link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ကို ချိန်ပိတ်ခံရပြီး သံဃာများကို အတင်းအကြပ် နေရာရွှေ့ခိုင်း link
- တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များက သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွးနွေးပွဲအတွက် အိန္ဒိယ၏ ထောက်ခံမှုကို တောင်းခံ link
- ရတနာပြပွဲက ပေးသော ထွေပြားသည့် သတင်းစကား link
- ဗြိတိန်နိုင်ငံရေးလေ့လာမှုအဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တသက်တာ နိုင်ငံရေးထူးချွန်ဆု ချီးမြင့် link
- မြန်မာပြည်တွင်းရှိ သံဃာထုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် link
- မြန်မာစစ်အစိုးရ ဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေမှုအပေါ် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ပြစ်တင်ရူတ်ချ link- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတ်ိန်မှပေးအပ်သည့် နိုင်ငံရေးထူးချွန်ဆုရရှိ link
- ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောlink
- ယခုနှစ်မကုန်မီ မြန်မာပြည် ပြန်သွားရဖွယ်ရှိဟု ဂမ်ဘာရီ မျှော်လင့် link
- ၀န်ကြီးချုပ် 101 (ဆောင်းပါး) link
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဒိုင်ယာလော့တွေ အောင်ဖို့ဆိုရင် (ဆောင်းပါး) link
- Bush calls Abbas, Olmert to White House, link
- Israel, Palestinians OK negotiating plan, link
- Award for Lifetime Achievement in Politics, link
- Rights Group Says Arrests in Burma Continue, link
- Israel, Palestinians Commit to Seek Peace Accord by End of 2008, link
Posted by Nyein Chan Aung at 11:10:00 AM0comments
- Dalai Lama condemns Myanmar crackdown, link
- Britain eases travel advice for Myanmar, link
- Daw Aung San Suu Kyi wins Lifetime Achievement in Politics, link
- ဖမ်းဆီးခံထားရပြီး သတင်းပျောက်လူပျောက်ဖြစ်နေသော မအေးမြင့်မြတ်ပြန်လည်လွတ်မြောက် link
- အာဏာပိုင်များမှ မဂ္ဂကျောင်းတိုက်မှ သံဃာတော်များ ဖယ်ရှားပေးရန် အမိန့်ပေး link
- အာဆီယံဒေသတွင်း အလုပ်သမားများ၏ အနာဂတ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပ link
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူကြောင့် ကလေးအလုပ်သမလားပိုမိုများပြားလာကြောင့် မွန်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာထုတ် link
- ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ပြန်လည်စတင်ရန် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ တိုက်တွန်း link
- မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာလမ်း စစ်တပ်များ ချထား ခရီးသွားသူများ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတိုးပွား link
- မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒေါ်လာ (၁၀) သန်းတန် သတ္တုကျိုစက်ကို စင်ကာပူက တည်ဆောက်မည် link
- မြန်မာ့အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို မစ္စတာဘမ်ကီမွန်မေတ္တာရပ်ခံlink
- ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုရှိမရှိ လာရောက်စစ်ဆေးရန် ကေအင်အယ်လ်အေ စစ်ဦးစီးချုပ် စိန်ခေါ်link
- ကလေးစစ်သားမသုံးဟု တိုင်းရင်းသား လက်ကိုင်အဖွဲ့များငြင်းဆို link
- လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ချက် link
- ဂျပန်သတင်းထောက်ကို နအဖစစ်တပ်က တမီတာအကွာမှ ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ဂျပန်ရဲပြောကြား link
- UN Envoy Urges Vietnam to Help Resolve Burma's Political Crisis, link
- Ceased fire groups prodded to support junta, link
- Myanmar sells USD 150 mn of gems at auction: official, link
Posted by Nyein Chan Aung at 9:59:00 AM0comments
News collection: Women activists stage small protest in Rangoon; Indian Buddhist monks protest against Burmese military junta
2nd Months Anniversary of Saffron Revolution
- မိတ္ထီလာ အန်အယ်ဒီက ဒေါ်စု ကျေညာချက်ကို ကြိုဆို link
- တောင်ဒဂုံ ၅၅ ရပ်ကွက်မှ မင်းမဲ့စရိုက်အဖြစ်အပျက် link
- ကလေးမြို့မှ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ကိုဝင်းကျော် ၆ ကြိမ်မြောက် အမှုရက်ချိန်း link
- သင်္ဃန်းကျွန်းလူငယ် မြသန်းထိုက်ကို ပုဒ်မ ၅-ည ဖြင့်စွဲချက်တင် link
- HRDP အဖွဲ့ဝင်တဦး အဖမ်းခံရ link
- ဗုဒ္ဓဂါယာမှ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်လပြည့်ဆုတောင်းပွဲ link
- သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြေငြာချက် link
- စက်တင်ဘာလတွင်အသက်ပေးခဲ့သော ရဟန်းရှင်လူများအတွက် ဒါနပြုအမျှဝေ link
- လူ့အခွင့်အရေးလူပ်ရှားသူတဦး ရန်ကုန်တွင်အဖမ်းခံရ link
- သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုဆရာတော် ဦးဂမ္ဘီရ၏ ခမည်းတော်ပျောက်ဆုံးနေ link
- ဖမ်းဆီးခံထားရသော ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ link
- လူ့အခွင့်အရေးလူပ်ရှားသူတစ်ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ link
- ဂျပန်သတင်းထောက်သေဆုံးမှုအပေါ်တိုကျိုမြို့တော်ရဲအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန် link
- စစ်အစိုးရကျင်းပပေးသော သံဃာစာမေးပွဲမဖြေဆိုရန် သီရိလင်္ကာရဟန်းတော်များတိုက်တွန်း link
- ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် နိုင်ငံတကာ သံဃာတော် ၁ဝဝ ကျော် ထိုင်သပိတ် ပြုလုပ် link
- ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်ကတ် ၀ယ်ယူ၊ ငှားရမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ link
- ရန်ကုန်တွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ခြောက်သွေ့ link
- ရဲလက်မှ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားသည့် မြန်မာအလုပ်သမား (၇) ဦးနှင့် ထိုင်း (၁) ဦး သေဆုံး link
- ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င်ဝင်ရောက်လာသော မြန်မာအလုပ်သမားများပါသည့် ကားတိမ်းမှောက် link
- UN envoy wants further Burma visit, link
- U.N. envoy on Myanmar wants to return by year end, link
- Indian Buddhist monks protest against Myanmar junta, link
- Indian Buddhist Monks Protest Against Burma's Military Rule, link
- Asia's Poorest Nations May Face Worst of Climate Change, link
- Boat sinks off Bangladesh; 50 missing, link
Posted by Nyein Chan Aung at 6:05:00 PM0comments
- ဒေါ်စုနဲ့ဖမ်းဆီးခံအမျိုးသမီးတွေလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆို link
- မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေ သုံးသပ်ချက် link- ဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးရန် မိထ္တိလာအဖွဲ့ချုပ်တောင်းဆို link
- ဒေါ်စုထုတ်ပြန်ချက်ကို ကန့်ကွက်ရန် ကြံ့ဖွတ်လိုက်လံစည်းရုံး link
- ပြင်သစ်သမတ္တကမြန်မာပြည်အရေးဆွေးနွေးဖို့ တရုတ်သမတ္တနှင့်တွေ့ဆုံမည် link
- ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုအပေါ်ကရင်လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငြင်းဆို link
- ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လဲယူထားပေမယ့်မငြိမ်းချမ်းနိုင် link
- Boat sinks off Bangladesh; 100 aboard, link
- Myanmar rebel group denies child soldier claims, link
- သံဃာ့ဦးလျှောင်အဖွဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းများအတွက် သာသနာ့ရက္ခိတ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း link
- Sarkozy will raise Burma issue in China, link
- Labor Party Cruises To Victory In Australian Election, (see the new leader view on Burma issue) link
- Burma Detects New Outbreak of Bird Flu, link
Posted by Nyein Chan Aung at 12:51:00 PM0comments
ဒီလိုနဲ့ ငါရှင်သန်ခဲ့ရ ဘ၀ထဲ
အပေါစားမိတ်ကပ်တွေ လိမ်းကျံထားတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမတစ်ယောက်လို
လူ့ယဉ်ကျေးတို့ရဲ့ ‘လူသားချင်းစာနာမူ’ ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့
အာဏာရှင်တို့ရဲ့ 'အရူးထမူ' ကိုလည်း ဆန့်ကျင်တတ်သူ..
၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 12:50:00 AM9comments
- မဇ္စိုမဂုဏ်ရည်ဒေါက်တာအရှင်ကောဝိတ တရားထဲမှကောက်နူတ်ချက် link
- မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်မှကျင်းပသော ကထိန်ပွဲကို စည်စည်ကားကား ကျင်းပ link
- ခင်ပွန်းကိုထောင်ချ ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးအား ထမင်းမကျွေးပဲစစ်ကြော link
- ပျောက်ဆုံး သံဃာများစာရင်း link
- ပျောက်ဆုံးနေသော ဗကပ ခေါင်းဆောင်များအတွက် သတင်းထုတ်ပြန်ပေးရန်တောင်းဆို link
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် အဖွဲ့ချုပ်ဝင်မိသားစုများတောင်းဆို link
- အစိုးရတပ်ရင်းတရင်းက ကေအိုင်အို အုပ်ချုပ်ရေးရုံးအားဝင်ရောက်စီးနင်း link
- တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ပူးကျင့်ရှင်းထန်ဖမ်းဆီးခံနေရဆဲ link
- Howard concedes Australia poll, link
- သံဃာတော်များကို ရက်ရက်စက်စက်နှိမ်နင်းပြီးနောက် ပါဌိပဌမပြန်စာမေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန် နအဖ ပြင်ဆင် link
- တပ်အင်အားနှင့်အညီစစ်သားစုဆောင်းရာတွင် ကလေးစစ်သားများစွာ အသုံးပြုခံရ link
- မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ကုလသမဂ္ဂမှ ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူ ဒါဏ်ခတ်ရန် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တောင်းဆို link
- မြန်မာနိုင်ငံကလေးစစ်သားအသုံးပြုမူ စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ကုလအတွင်းရေးမူးချုပ် အစီရင်ခံစာတင်သွင်း link
- မြန်မာနိုင်ငံကြောင့်နိုင်ငံရေးရော စီးပွားရေးပါ အာဆီယံဖိအားပေးခံနေရ link
- မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့အချို့ရန်ကုန်မြို့တွင် လူံ့ဆော်စာများဖြန့်ဝေ link
- ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်စုကိုယုံယုံကြည်ကြည် ထောက်ခံသင့်ကြောင်း ကချင်အမျိုးသားအဖွဲ့ကဆို link
- UN: Myanmar must free all child soldiers, link
- UN report on Burmese child soldiers, link
- UN Chief Says Children's Rights Violated in Burma, link
- U.N. urges Myanmar to stop using child soldiers, link
Posted by Nyein Chan Aung at 9:47:00 AM0comments
- ငွေတန်ဖိုးနှင့် ကုန်ဈေးနူန်းအခြေအနေ link
- ကဗျာဆရာအောင်ဝေးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိ link
- ဒဗလျူအမ်ဘီမှ အမျိုးသမီးများကို အကူအညီပေးနိုင်မဲ့ လူပ်ရှားမူများစတင် link
- အမျိုးသမီးများအတွက် (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသူများက ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးလူပ်ရှားသူများထံ တောင်းဆိုချက် (၁) link
- အမျိုးသမီးများအတွက် (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသူများက ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးလူပ်ရှားသူများထံ တောင်းဆိုချက် (၂) link
- ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ မအေးမြင့်မြတ်ပျောက်ဆုံးနေ link
- ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဘိုကလေးမှ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌအပါအ၀င် (၆)ဦးကို အမှု (၂)ခုနှင့်စွဲချက်တင် link
- ရန်ကုန်တွင် လျှပ်စစ်မီးပျက်မှု ပိုမိုဆိုးရွား link
- ကေအိုင်အို တိုက်နယ်ရုံး နအဖ တပ်မှ စီးနင်း၊ အရာရှိ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီး link
- ဒဂုန်မြို့သစ် ကြံ့ဖွံ့များ လူထုဘဏ္ဍာ အလွဲသုံးစားလုပ် link
- ဖမ်းထားသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် အီးယူနှင့်အာဆီယံ ပူးတွဲတောင်းဆို link
- ဥရောပပါလီမန်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအား ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မူများဆက်လုပ်သွားမည် link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထုတ်ပြန်ချက်ကို မကန့်ကွက်သဖြင့် ကေအိုင်အိုနှင့် နအဖအကြားတင်းမာ link
- ကဗျာလက်နက်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင် ကဗျာဆရာအောင်ဝေးပြော link
- သတင်းပျောက်လူပျောက်ဖြစ်နေသော မအေးမြင့်မြတ်၏အဒေါ်ဖြစ်သူနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များ link
- နေပြည်တော်ကို ပစ် (ဆောင်းပါး) link
- မြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေဟာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲ နစ်နာစေတယ်လို့ အီးယူသမဂ္ဂပြောကြား link
- Burmese Army arrests eight KIO members, link
- KIO under pressured, link
- European Lawmakers Vow to Oppose Trade Deals Over Burma, link
- Burma urged democratic reforms, link
- ASEAN and EU release joint declaration, link
Posted by Nyein Chan Aung at 5:24:00 PM0comments
- မြန်မာ့အရေး ၏ ဂမ်ဘာရီနှင့် နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များ စင်ကာပူတွင်တွေ့ဆုံ link
- မြန်မာ့အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အီးယူနှင့်အာဆီယံသဘောထား ကွဲလွဲနေဆဲ link
- တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကို နအဖခေါ်ယူထိမ်းသိမ်းနေ link
- ထိုင်းမြန်မာဆက်ဆံရေးနွေးထွေးတဲ့အရပ်အယောင်မရှိဟု အကဲခတ်များပြောဆို link
- Burma Campaign UK က RedBridge Council ရဲ့ရင်းနှီးမြူပ်နှံမူတွေအပေါ်ဝေဖန်နေ link
- ပတ်စ်ပို့ လျှောက်ထားသူများ အလွန်များပြားလာ link
- အဆိုတော်များ စတိတ်ရှိုး ဆိုလိုပါက ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ တင်ပြရမည် link
- ဖမ်းဆီးခံ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် link
- ဒေါ်စုထုတ်ပြန်ချက် ထောက်ခံသော စီအာပီပီအဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရ link
- ဆိုက်ကလုံးအဖွဲ့ကို ဂီတအစည်းအရုံးက စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ တနှစ်ပိတ် link
- အဖမ်းဆီးခံထားရသော ရဟန်းတော်များကို ထောင်ဝင်စာတွေခွင့်မရ link
- အစိုးရပထမပြန်စာမေးပွဲ သပိတ်မှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စာသင်တိုက်များ၏သဘောထားအမြင် link
- 88 မျိုးဆက်ကျောင်းသားကိုအောင်နိုင်၏ဇနီးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် link
- အစိုးရပထမပြန်စာမေးပွဲကို သံဃာများသပိတ်မှောက်ရန်ပြင်ဆင် link
- စစ်အစိုးရအား လက်နက်ရောင်းချခြင်း မပြုရန် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းအဖွဲ့ကတောင်းဆို link
- ဒေါ်စုနှင့်အထိမ်းသိမ်းခံများပြန်လွှတ်ပေးရန် အီးယူနှင့် အာဆီယံတောင်းဆို link
- မြို့နယ်များမှဖမ်းဆီးခံထားရသူများ ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရသေး link
- တပ်မတော်မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင်များ အလိုရှိသည် (ဆောင်းပါး) link
- မြန်မာ့သစ်တောများ နှစ်စဉ်ပြုန်းတီးနေ link
- မြို့နယ်အချို့ ကထိန်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး link
- တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ဖမ်းဆီးခံရ link
- မြန်မာပြည်ကသွေးစွန်းတဲ့ ပတ္တမြားမ၀ယ်ယူရေး အမေရိကန်ရ တနာကုန်သည်တွေထောက်ခံ link
- မြန်မာ့အရေးကုလဆုံးဖြတ်ချက်ကို အာဆံယံနိုင်ငံများထောက်ခံခြင်းမရှိ link
- Southeast Asians and Europeans Agree Burma Issue Should Not Hold up Trade Negotiations, link
- British PM Stops Deportation of Burmese Asylum Seeker, link
- EU and ASEAN call for Myanmar democracy, no trade deal, link
- Myanmar opposition says arrests undermine talks, link
- ASEAN, EU agree to speed up trade deal, link
- Asian Leaders Meet EU to Further Ties, Urge Burma Reforms, link
- Burma’s Bangkok Embassy Seeks Names of Student Protesters, link
- UWSA and KIO Abstain from Condemning Suu Kyi, link
- Role of New ASEAN Rights Body Questioned, link
- UN Rights Expert Urges Continued International Pressure on Burma, link
- No sanctions on Burma: Lee, link
- ဗြိတိန် အတွင်းဝန် စင်္ကာပူမှာ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး link
Posted by Nyein Chan Aung at 10:34:00 AM0comments
တောက်ခေါက်သံများ.. ပုန်းခိုကျင်းများနှင့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၏ အခန်းဆက်
တောက်ခေါက်သံများ.. ပုန်းခိုကျင်းများနှင့်.. ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး၏ အခန်းဆက်..
ကိုလွမ်းဆွေဘလော့မှာ ဆရာအောင်ဝေးရဲ့ အက်ဆေးကဗျာကိုတွေ့ရတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရ ပါတယ်။ ဆရာအောင်ဝေး ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ်.. ဘယ်လိုတွေ ခံစားနေရ တယ်ဆိုတာကိုလည်း တိုက်ရိုက်မြင်ခွင့် ရလိုက်တယ်။ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါ ရောင် တော်လှန်ရေး ဒီရေဟာ ဆရာအောင်ဝေး ရင်ဘတ် ထဲမှာ အရှိန်အမြင့်မားဆုံး တက်နေဆဲပါ..၊ ဒါပေမဲ့ တပြိုင်တည်းမှာ ဆရာဟာ အားမလို အားမရတွေ ဖြစ်နေ တယ်.. ကြေကွဲနေတယ်.. ပေါက်ကွဲနေတယ်..။ ခံစားချက်မျိုးစုံကို တပြိုင်နက်တည်း ခံစားနေရတယ်..။
ဆရာက ပြင်ပမှာရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတယ်..။ ကရုဏာ ဒေါသဖြစ်နေတယ်..။ လှောင်အိမ်ထဲမှာ သီကြွေးနေတဲ့ ငှက်ကလေး တွေလို့ဆိုထားတယ်..။ လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်ကလေးတွေဟာ ဘယ်လိုပင် တေးသီပါစေ မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့..။ ဆရာအောင်ဝေးဟာ လမ်းမတွေ ပေါ်မှာ နောက်တစ်ပွဲ နွှဲကြဖို့ စိတ်ဇောသန်နေတယ်..။ အချိန်နဲ့အမျှ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချဖို့ စဉ်းစားနေ တယ်။ နည်းလမ်းရှာ နေတယ်။ ရွှေဝါရောင် ဒီရေလိူင်းတွေ သူ့ရင်ထဲမှာ ၀ိုင်းဒိုင်းကျဲ တိုးဝှေ့ တိုက်ခတ်နေဆဲ။ ပြီးတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဒိုင်ယာလော့ကိုလည်း လှောင်ပြောင် ထားတယ်..။ သူ့ခေတ်ပြိုင် ရဲဘော်ကဗျာ ဆရာတွေ ကိုလည်း တိုက်ပွဲ ၀င်ကြဖို့ ဆော်သြထားတယ်။
တကယ်တော့ ဆရာအောင်ဝေးဟာ စစ်အာဏာရှင်ကို ချဲလင့်လုပ်ခဲ့သူ၊ ယခုလက်ရှိအခြေ အနေမှာ ပုန်းခိုကျဉ်း ထဲမှာ ကာလကြာရှည် ပုန်းခို နေရသူ မျိုးချစ်ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ် ပါတယ်..။ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကာလမှာ ကိုဇာဂနာ၊ ကိုကျော်သူတို့နဲ့ အတူ ပြည်သူလူထုကို ရှေ့တန်းကနေ ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ် တယ်..။ ကိုကျော်သူ ခေါ်အစစ်ခံရ ပြီးပြန်လွတ်လာတော့ ပုန်းခိုကျင်းထဲကနေ လှမ်းပြီးအားပေးစကား ပြောကြား ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ ဆူးလေရှေ့မှာ ကျော်ကိုကို တို့နဲ့ အတူ လူထုပရိသတ်ကို ရဲဝံ့စွာ တရားဟော ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ အောက်တိုဘာ ပထမပတ်မှာ ဗွီအိုအေ သတင်းဌာန “သူယုံကြည်ရာ အစီအစဉ်” ကနေ စစ်အစိုးရကို ဗြောင်စိန်ခေါ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်..။
ပုန်းရှောင်နေရတဲ့ အရှင်ဂမ်ဘီရနဲ့ သူ့ရဲဘော် ရဟန်းများ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုလှမျိုးနောင်၊ မမီးမီး၊ ကိုအောင်သူ၊ ကိုစိုးထွန်း၊ ကိုထွန်းမြင့်အောင် မနီလာသိန်း၊ မစုစုနွေး၊ မဖြူဖြူသင်း၊ ကိုကျော်ကိုကို၊ ကိုလင်းထက်နိုင်၊ ကိုစည်သူ မောင်နဲ့မဟန်နီဦး တို့လိုပဲ ဆရာအောင်ဝေးဟာလည်း စစ်အစိုး ရကနေ အပြင်းအထန် လိုချင်နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုအောင်သူ၊ မမီးမီးတို့ ကတော့ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်းအင်းတကော် ရာဘာ ခြံထဲမှာ ပုန်းအောင်းနေ တုန်း အဖမ်းခံခဲ့ရပြီ။ ကိုလှမျိုးနောင်လည်း အလွန်ဆိုးရွားနေတဲ့ မျက်စိ ကိုခွဲစိပ်ရန် ပုန်းခိုကျင်းထဲက ထွက်အလာ အဖမ်းခံခဲ့ရပြီ၊ အခု မျက်စိ တဖက်ပျက်သွားပြီ ကြားရ။ စည်သူမောင်နဲ့ ဟန်နီဦးလည်း အဖမ်းခံခဲ့ရ။ အခုသူတို့တွေ အင်းစိန် နရသိန်မှာ။ အရှင်ဂမ်ဘီရနဲ့ မစုစုနွေး တို့လည်းဒီလအစောပိုင်းမှာ အသီးသီး အဖမ်းခံခဲ့ ကြရ။
အရှင်ဂမ်ဘီရဟာ နိုင်ငံတော်ကို ပုန်ကန်သူ၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန် ရေးကို ဦးစီးဦးဆောင် ပြုသူအဖြစ်သေဒဏ် (သို့မဟုတ်) တသက်တကျွန်း ပစ်ဒဏ်ချမှတ် ခံရလိမ့် မယ်လို့ သူ့မိ သားစုကို ရေမြေ့သနင်း ဘ၀ရှင် မင်းတရားကြီး ရဲ့ လက်မရွံ့ လူသတ်သမားတွေက သွားရောက် ပြောကြား ခဲ့တယ် လို့ကြားရတယ်။
လက်မရွံ့လူသတ်သမားတွေရဲ့ လက်ကနေလွတ်အောင်ပုန်းရှောင်ရင်း ခြောက်အိပ်မက်တွေ မက်နေရတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ထပ်တူထပ်မျှ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်..။ ဆရာ့မိသားစုလည်း ဆရာ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန် နေကြရော့မယ်..။ ဆရာ့ဝင်ငွေတစ်ခုတည်း အပေါ် မှာသာရပ်တည်နေရ တယ်ဆိုရင် ဆရာ့မိသားစုတော့ အခက် တွေ့နေကြပြီပေါ့..။
ကောင်းကင်တခုလုံး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေမှတော့ ပျိုးပင်တွေကို ဘယ်လိုများကျဲတော့ မှာလဲ..။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးမှာ ပန်းတချို့တော့ ကြွေလွင့်ခဲ့ရ ပေါ့..။ ဒါပေမဲ့ မကြာခင် ရောက်လာတော့မဲ့ နွေဦးကို ဘယ်သူက များ တားဆီးထား နိုင်မှာလဲလေ..။
မည်သို့ဆိုစေ ဆရာ့စိတ်ဓါတ်တွေ အမြင့်ဆုံးမှာရှိနေတယ်လို့ဆရာက ဆိုထားလို့ ၀မ်းသာ ကြေနပ်ရပါတယ်။ တော်လှန်ရေးက မပြီးသေးပါဘူး။ အခုမှ ပထမဆုံးစာမျက်နှာကို လှန်ခဲ့ကြ ပေါ့။ အဆုံးမှာတော့ အောင်ပွဲဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရှိရမှာပါ။ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ရဲဘော်ကျော်စွာမိုးရေးတဲ့ ဆောင်းပါးခေါင်းစည်း ထဲက အတိုင်းပဲ “လှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေသရွေ့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသည်” ပါပဲ။ ကျနော်တို့ တိုက်ပွဲကိုဆက်ကြ ရမယ်..။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ အပြစ်တွေပုံချ မနေကြေးဆရာရေ..။ ကိုယ်ကျရာ အခန်းကို အကောင်းဆုံး ကပြ ကြ ရလိမ့်မယ်..။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ သာသနာ အတွက် ကျနော်တို့ စွန့်လွှတ်တိုက်ပွဲဝင်ကြ ရလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မှာ တခြားရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိတော့ဘူး..။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးက သွေးစွန်း စာမျက်နှာတို့ရဲ့ အခန်းဆက်တစ်ခု ဖြစ်သလို စက်တင်ဘာသစ်ရဲ့ မော်ကွန်းနီလည်း ဖြစ်တယ် ..။ သို့မဟုတ်.. အမှောင်ခေတ်ကို အဆုံးသတ်မဲ့ အဖိနှိပ်ခံ လူတန်းစားတို့ရဲ့ မိစ္ဆာသို့ တိုက်ပွဲခေါ်သံပေါ့..။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူအား လုံးပါဝင် ကြရလိမ့်မယ်..။ ပြည်သူလူထု အားလုံးကို မိစ္ဆာက စိန်ခေါ်နေပြီ..။ အရူံးမပေးသေးသ၍ ဘယ်တော့မှ ရူံးနိမ့်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး..။
ဆရာတခါက ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျနော်တို့ ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ “ခြင်္သေ့” ကဗျာထဲကအတိုင်း “တောသုံးတောင်သို့ အ၀င်မှာ ခြင်္သေ့ဟာ သမင်မမျက် လုံး ကိုပခုံးပေါ်ပစ်တင် လိုက်တယ်... ဒီကောင် လွမ်းခဲ့ပါတယ် ညီမလေးရယ် ငါ့နှလုံး သားမှာ ပန်းများဝေဖူး ဒီနွေဦးဟာ မင်းခူး ယူဖို့ပါ... ကန္တာရမဆန်ပါဘူး ငါ ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ” ဆိုသလို ပေါ့.. သူရဲကောင်းမှန်ရင် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေတော့ ရှိကြပေလိမ့်မယ် ဆရာရေ.. ဒါပေမဲ့ ဆရာဟာ ခြင်္သေ့တစ် ကောင် ရဲ့ ရဲရင့်မူမျိုးနဲ့ အခက်အခဲအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆရာအောင်ဝေး.. လွတ်အောင်ပုန်းနိုင်ပါစေ..။ တော်လှန်ရေးတာဝန်တွေ ဆက်လက်ထမ်း ဆောင်နိုင်ပါစေ..။
၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇။
Essays fromaBomb-shelter
1. Survive on the run
In the small dark rooms while I was hidding, it seemed there wasaNightingale's sacrifice lamp lightening upon me.
From the murky bottlenecks when I was fleeing, it seemed there wasaMadame Lenin's lover lamp following me closely.
Through the black haunted wilderness where I was crossing, it seemed there was an Aung San Suu Kyi's unafraid lamp guiding me to freedom.
Hello! My sweet enemies, do you know how I can survive on the run for so long because the sun always rises in my mind.
2. If – and –Then
If you're only strong in proposal politics and nobody is fighting in the front line then it's likeabird singing inacage-nothing happen.
If you're only hungry in future democracy and nobody is protesting on the urban streets then it's likeatiger starving inagaol-nothing happen.
If you're only interested in junta's dialogue and nobody is rallying under the revolution flag then it's likeastorm blowing inatea cup-nothing happen.
Oh! My comrade poets, If you're only crazy in poetry and poetry and nobody is screaming atared squre of the deaths then it's likeasword rusting inascabbard-nothing happen.
Posted by Nyein Chan Aung at 11:24:00 PM0comments
News collection - India push the junta over reforms
- အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ်မာမိုဟန်ဆင်းနှင့် နအဖ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်တွေ့ဆုံ link
- ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများ၌ ကုလသမဂ္ဂအရာရှိဓါတ်ပုံ နေရာမပေးရဟု အမိန့်ထုတ် link
- စီအာပီပီကောင်မတီဝင်များ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရ link
- အရှင်ဂမ်ဘီရမိခင်အား အာဏာပိုင်တွေလိုက်နှောက်ယှက် link
- နအဖရဲ့ခေါင်းမာမူကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြားဝင်မူ ပိုမြင့်လာနိုင် link
- ကုလသမဂ္ဂနဲ့လက်တွဲချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နအဖကို စမ်းသပ်ရမဲ့အချိန်ရောက်ပြီ link
- မြန်မာ့အရေးယူအန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်များ မထောက်ခံ link
- လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မူတွေအတွက် စစ်အစိုးရကို ပြစ်တင်ရူတ်ချကြောင်း ကုလဆုံးဖြတ် link
- မြန်မာ့အရေးအတွက် ကုလကိုယ်စားလှယ်ကို ထောက်ခံရန် သြစတေးလျှအစိုးရ တိုက်တွန်း link
- သူ့အပေါ်အပ်နှင်းထားတဲ့တာဝန် မြှင့်တင်ပေးရန် ဂမ်ဘာရီတောင်းဆို link
- 88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို မိသားစုဝင်တွေ ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခွင့်ရခဲ့ link
- ဦးပူကျင်ရှင်းထန်ကို အာဏာပိုင်တွေခေါ်ယူမေးမြန်း link
- ဂမ်ဘာရီစင်ကာပူတွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး link
- မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီးယူကိုယ်စားလှယ် အန်စီဂျီယူဘီ၊ အမေရိကန်အရာရှိအချို့နှင့် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြေငြာချက်အပေါ် ပြည်တွင်းအဖွဲ့များ၏ ကန့်ကွက်မူနှင့် သတ်သက်၍ သုံးသပ်ချက် link
- ဒေါ်စုနှင့် ဦးအောင်ကြည် ဆွေးနွေးပွဲများ အဖွဲ့ချုပ် ကြိုဆို link
- အာဏာပိုင်များက သံဃာတော်များကို လုံခြုံရေးတင်းကျပ် link
- လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေသရွေ့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသည် (ဆောင်းပါး) link
- UN's Special Envoy to Burma Wants Stronger Role to Resolve Crisis, link
- Press Conference at ASEAN Summit, link
- Asia searches for climate change consensus, link
- More American Jewelry Stores Banning Burmese ''Blood Rubies'', link
- New Southeast Asian Human Rights Body Likely to Keep Hands Off Burma, link
- UN committee approves Myanmar resolution, link
- Myanmar faces critics, allies at Asia summit,
- East Asian leaders to pledge emissions cuts, link
- India push the junta over reforms, link
- UN panel slams Myanmar crackdown on protests, link
- UN Panel Criticizes Burma's Crackdown on Protesters, link
- U.N. rights panel rebukes Myanmar and North Korea, link
- India PM prods Myanmar over democracy: official, link
Posted by Nyein Chan Aung at 9:52:00 AM0comments
ကဗျာအသစ်တွေမရေးနိုင်သေးလို့ ဟို.. အရင် ၉၀-၉၅ လောက်က ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာဟောင်းလေး တချို့ကိုပဲ (ကျနော်ယခုအချိန်မှာ သိပ်မကြိုက်တော့ပေမဲ့) ယခင်ကရေးထားတဲ့ လက်ရာအတိုင်း မျက်နှာငယ်စွာ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်..။ အသစ်ကလေးတွေလည်း ထပ်ရေးဖို့ အားယူနေပါတယ်..။
Posted by Nyein Chan Aung at 1:06:00 AM0comments
- မြန်မာစစ်အစိုးရ ကလေးစစ်သားစုဆောင်းနေ link
- ဒေါ်စုကြေငြာချက်ကို ဦးရွှေအုန်းထောက်ခံ link
- ကျောင်းတိုက်စောင့် ကြံ့ဖွတ်ဂေါပကလူကြီးများ ညစ်ညမ်းဗွီဒီယိုကြည့် link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ၂ယောက်ထားရှိရန် စစ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုမည် link
- အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်အတွင်း ပြည်ပရောက်လူပ်ရှားသူအချို့ဆန္ဒပြ link
- အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၊ အားနည်းချက်များ ရှိနေသေးဟုဝေဖန်မူများရှိ link
- ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းသား ၈၀ ခန့်ပြန်လွန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမပါ link
- ကေအိုင်အိုခေါင်းဆောင်များ၏နေအိမ်များကို အာဏာပိုင်များက ရှာဖွေပြီးလက်ကိုင်ဖုန်းများသိမ်းယူ link
- Issue of Burma Dogs Southeast Asian Summit, link
- ASEAN Signs Landmark Charter That Seeks to Integrate Region, link
- စင်ကာပူရောက်မြန်မာလူငယ်များ အော့ခစ်တာဝါရှေ့၌ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ link
- တရုတ်ဘက်မှစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ မြန်မာပြည်ဘက်ပေးပို့နေ link
- ဂမ်ဘာရီပယ်ချမည့်အစီအစဉ်ကိုအာဆီယံပယ်ချ link
- Asean kowtows to Rangoon, link
- Southeast Asian leaders adopt charter, link
- ASEAN leaders sign charter amid Myanmar row, link
- EU and US Discuss Burma Policy Coordination, link
- Southeast Asian summit soured by Myanmar row, link
- Activists attack ASEAN on lack of Myanmar pressure, link
- သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု၏ ပန်ကြားချက် link
- ASEAN to sign landmark charter amid Myanmar row, link
- Southeast Asian summit opens with Myanmar row, link
- ASEAN leaders open formal summit, link
- Philippines could block new Asia charter, link
- သိန်းစိတ်၏ကန့်ကွက်မူကြောင့် ဂမ်ဘာရီစကားပြောမည့်အစီအစဉ်ပျက်ရကြောင်း အာဆီယံဥက္ကဌပြောကြား link
- ဒီမိုကရေစီမရမချင်း အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ဟု ဦးဝင်းတင်ပြော link
- ဂမ်ဘာရီ၏မြန်မာ့အရေးရှင်းလင်းတင်ပြမူ ပျက်ပြားသွားသည့် အပေါ်သုံးသပ်တင်ပြချက် link
Posted by Nyein Chan Aung at 12:03:00 PM0comments
News collection - Myanmar's detained Suu Kyi taken to state guesthouse; ASEAN Cancels Burma Briefing by UN Envoy; EU Imposes Fresh Sanctions on Burma
- ASEAN Cancels Burma Briefing by UN Envoy, link
- U.S. Trade Representative Says Situation in Burma Undermining ASEAN's Credibility, link
- EU Imposes Fresh Sanctions on Burma, link
- ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမလုပ်ရင် အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးမှာမသေချာကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်ပြော link
- ဂမ်ဘာရီအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာအရေးပြောဖို့ပျက်ပြား link
- အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းပေးပို့ချက် link
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကာလအတွင်း ကန့်ကွက်ကြေငြာမူများမလုပ်သင့်ကြောင်း အန်အယ်ဒီပြော link
- မြန်မာအလုပ်သမားငါးဦးအဖမ်းခံရမူ ထိုင်းအာဏာပိုင်များဖော်ထုတ် link
- ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူရန် မြင်းခြံ အာဏာပိုင်များ လုပ်ဆောင်နေ link
- စစ်အစိုးရ၏လမ်းပြမြေပုံကိုလက်မခံကြရန် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများတောင်းဆို link
- ဂန္ဒီကြီး၏အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး သစ္စာဂဂြဟလမ်းစဉ်နှစ်တရာပြည့်ပွဲကြီးကျင်းပ link
- အီးယူကနအဖကို စီပွားရေးပိတ်ဆို့မူ ထပ်မံပြုလုပ် link
- ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နအဖ ၀န်ကြီးချုပ်ကိုတွေ့ဆုံပြီးဖိအားပေးမည် link
- နအဖကိုထောက်ခံနေတဲ့အာဆီယံကို အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ဝေဖန် link
- ဂမ်ဘာရီအပြောနှင့် နအဖလုပ်ဆောင်ချက်ကွာခြား link
- မေဒေးနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်သူများ အယူခံကို တရားသူကြီးရုံးက ပလပ်လိုက် link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးအောင်ကြည်တို့ တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံ link
- လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်နေသူများ ထောင်ချခံနေရ link
- Europe launches tougher Burma sanctions, link
- Burma 'must comply' with pact, link
- No Compromise, Says Junta Mouthpiece, link
- Daw Aung San Suu Kyi taken to Burma meeting, link
- ASEAN under mounting pressure regarding Burma issue, link
- Myanmar sends mixed messages on reform, link
- Myanmar's detained Suu Kyi taken to state guesthouse, link
- ASEAN leaders to confront Myanmar, link
- အနာဂတ် နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်စို့ (ဆောင်းပါး) link
- စွမ်းအားရှင်များ ဟစ်ဟော့ပွဲကို ပြဿနာရှာ link
- မြန်မာအလုပ်သမားများ သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် တရားခံ ၂ ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ link
- သံဃာတော်များ ဆက်လက်ကံဆောင်နေဆဲ link
- မြန်မာကိုအာဆီယံမှ ရပ်ဆိုင်းရေး အမေရိကန်တိုက်တွန်းချက်ကို အာဆီယံလက်မခံ link
- Myanmar army hits Indian rebels: officials, link
Posted by Nyein Chan Aung at 5:53:00 PM0comments
News collection - China calls for quick reforms in Myanmar, Burma top issue at Asean meeting
- ASEAN Rejects US Proposal to Suspend Burma, link
- Southeast Asian Leaders Say They Do Not Support Sanctions Against Burma, link
- Myanmar tops agenda as ASEAN meets, link
- ASEAN rejects US call to suspend Myanmar, link
- ၀ိနည်းတော်နဲ့အညီဆက်လက်ကံဆောင်ဖို့ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုတောင်းဆို link
- နအဖ၏ဆေးရုံစည်းကမ်းဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မူ link
- မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်း၊ ရွှေဈေးမြင့်တက် link
- ကုလကိုယ်စားလှယ် ၂ဦးခရီးစဉ်အပေါ် သုံးသပ်ချက် (၁) link
- ကုလကိုယ်စားလှယ် ၂ဦးခရီးစဉ်အပေါ် သုံးသပ်ချက် (၂) link
- မြညိပ်ရိုဟိုတယ်တွင် စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ၌အဆိုတော် ဂျီတုံးအဖမ်းခံရ link
- Laos and Cambodia slam Myanmar sanctions, link
- Thousands attend Myanmar gems sale despite outcry, link
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန်မြင့်လုပ်ရန် တရုတ်တိုက်တွန်းမူအပေါ် သုံးသပ်ချက် link
- စက်တင်ဘာဆန္ဒပြပွဲသတင်းများကို အင်တာနက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သူ တစ်ဦး ကမ္ဘာ့ဘလော့ပြိုင်ပွဲတွင်အထူးဆုရ link
- Asean leaders ready to sign landmark charter, link
- Singapore Boosts Security Ahead of ASEAN Summit, link
- UN envoy: Burma admits killing 15, link
- China calls for quick reforms in Myanmar, link
Posted by Nyein Chan Aung at 12:12:00 PM0comments
စစ်ပွဲ အလောင်းနဲ့ ဒုက္ခိတတွေကို
၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
Posted by Nyein Chan Aung at 7:39:00 PM 1 comments
- ဖခင်နာမကျန်းဖြစ်ရာမှ ဆုံးပါးသည်အထိ တွေ့ဆုံခွင့်မရသော မဖြူဖြူသင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် link
- မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆင်းရဲမွဲတေမူ စစ်အစိုးရ၏ညံ့ဖျင်းမူကြောင့်ဟု စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဝေဖန် link- Burma's Ruling General Vows to Follow Roadmap to Democracy, link
- တန်ဆောင်တိုင်ပဒေသာပင်မလှည့်ရန် ကျောင်းသားများပိတ်ပင်ခံရ link
- အာဏာပိုင်များနှောက်ယှက်မူကြောင့် မဖြူဖြူသင်းဖခင်သေဆုံး link
- အမေရိကန်သမတ္တနဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် အိမ်ဖြူတော်တွင် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး link
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမူများ သီးခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ပြော link
- မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမူအကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးလူပ်ရှားသူများဆွေးနွေး link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြေငြာချက် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကို ကိုယ်စားမပြုဟုဆိုနေခြင်းအပေါ် ENC တုန့်ပြန် link
-US, Japan Condemn Burma's Crackdown on Demonstrators, link
- US Lawmakers Urge ASEAN to Suspend Burma From Group, link
- UN Envoy: 14 Killed in Crackdown on Demonstrations in Burma, link
Posted by Nyein Chan Aung at 3:24:00 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြေငြာချက်ကိုဆန့်ကျင်ရန် စစ်အစိုးရမှ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား ဖိအားပေးစေခိုင်းနေခြင်းအပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ သဘောထားကြေငြာချက်
Posted by Nyein Chan Aung at 2:27:00 PM 1 comments
- အောင်ဓ္ဓမပါလဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကြံ့ဖွတ်နှင့်မယကစီနင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကို ဖမ်းဆီး link
- မြန်မာ့အရေးနိုင်ငံတကာက ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖို့ ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ပြောကြား link
- ဖမ်းဆီးမူများရပ်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ရန် လူထုကော်မတီတောင်းဆို link
- ရန်ကုန်မြို့၌စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်များဖြန့်ဝေ link
- ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား ကျောင်းဆရာများကို ဖမ်းဆီးနေ link
- သတင်းစာ၌သေစာရင်းဖော်ပြချက်နှင့် ပီညဲရိုးအားပြောဆိုချက်ကွဲလွဲနေ link
- လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိတ်အာဒီပီကြေငြာချက်ထုတ် link
- ဆွေးနွေးပွဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အပြောအဆိုမျိုး နအဖရှောင်ရှားသင့် link
- မြန်မာ့အရေးအာဆီယံကဖိအားပေးရေး တောင်းဆိုမူများ အရှိန်တိုးမြှင့်လာ link
- ရန်ကုန်မြို့တွင် သံဃာတစ်ပါးကို အာဏာပိုင်များရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး link
- စစ်အစိုးရကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆီ တွန်းအားပေးမယ်ဟု ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား link
- မုံရွာအဖွဲ့ချုပ်လူငယ် ကိုညွန့်အောင်ကို ထောင် ၂နှစ်ချမှတ်ခံရ link
- ဆန္ဒပြသံဃာများကို ဆွမ်းရေချမ်းကပ်တဲ့ ၀န်ထမ်းများနယ်ပြောင်းခံရ link
- Burma to free Thai inmates for King's birthday, link
- ဒေါ်စု ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရန် တိုင်းရင်းသားများကို ဖိအားပေး link
- ဆရာတော် ၂ ပါး၏ တရားခွေများ အပိတ်ခံရ link
- တော်လှန်ရေး မပြီးသေးပါ (ဆောင်းပါး) link
- ဒေါ်စု ကျေညာချက်ကို ဆန့်ကျင်ရန် နအဖ မှ ငြိမ်းများကို ဖိအားပေး link
- Middle Line ဂျာနယ် အပိတ်ခံရ link
- China Blocks UNSC Presidential Statement on Burma, link
- Myanmar frees six political prisoners, link
- Pinheiro Determines Death Toll in Burma Crackdown, link
- Envoy to reveal Myanmar death toll, link
- မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ တင်ပို့ခွင့်ပိတ်ဆို့မူ ဥပဒေတင်သွင်းရေး လွှတ်တော်အမတ် ဆက်လက်ကြိုးစား link
Posted by Nyein Chan Aung at 11:59:00 AM0comments
News collection - Paulo Sergio Pinheiro concludes his visit
- ဦးဝင်းတင်နဲ့ စုစုနွေးကို ပီညဲရိုးတွေ့ဆုံ link
- အဓမ္မလုပ်အားပေးရပ်တန့်ရန် အိုင်အယ်လ်အို တောင်းဆို link
- ပီညဲရိုးခရီးစဉ်ပြီးဆုံး ဒေါ်စုနှင့်တွေ့ခွင့်မရ link
- နအဖကိုလက်နက်စက်ရုံထောင်ပေးတဲ့ ဒေ၀ူးဥက္ကဌထောင်တနှစ်ကျ link
- ကနေဒါက မြန်မာကို ပြင်းထန်သည့် ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်မည် link
- မြန်မာ့ အရှုပ်ထုတ် ဘယ်သို့ ရှင်းရပါ့ (ဆောင်းပါး) link
- ညီညွတ်မှ တိုင်းပြည် လွတ်မြောက်မည် link
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ခြင်း (ဆောင်းပါး) link
- UN Rights Expert Visits Notorious Burmese Prison, link
- Leading Monk Charged with Treason, link
- Pinheiro Meet Prominent Burmese Political Prisoners, link
- နအဖ ဖိအားကြောင့် ဒေါ်စု ကျေညာချက်ကို ဆန့်ကျင်ရဟု တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များပြော link
- UN investigator meets Myanmar prisoners, link
- We are in control: Burma's ruling junta, link
- မစုစုနွေး အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ link
- At least 23 missing after Burma ferry sinking, link
- မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမူရှိနေသေးဟု အိုင်အယ်အိုပြော link
- ကုလလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ခရီးစဉ် ဒီကနေ့ပြီးဆုံးမည်၊ ဖမ်းဆီးမူများဆက်ရှိနေဆဲ link
- Canada to Tighten Sanctions on Burma, link
- UN Rights Expert Meets with Burmese Senior Officials, link
Posted by Nyein Chan Aung at 1:41:00 PM0comments
- ဆန္ဒပြကျောင်းသားများအား မြန်မာသံရုံးက ပြဿနာရှာ link
English version is also available in the following
ဦးဇင်းကတော့ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေရဲ့ လူပ်ရှားမူမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးကောဝိဒလို့ခေါ်တဲ့ စာသင်သံဃာတပါးပါ၊ ဦးဆောင်တယ်ဆိုတာထက် လူထုကပေးတဲ့တာဝန်ကို ယူခဲ့ရတယ်လို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါ၊ ဦးဇင်းဒီစာကိုရေးသားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒါယိကာမကြီးဒေါ်စုရဲ့ ကြေငြာချက်နဲ့ မြန်မာပြည်က ရဟန်းရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါယိကာမကြီးရဲ့ ကြေငြာချက်ကို ရေဒီယိုတွေကကြားတော့ ဒါယိကာမကြီးရဲ့ ပျော့ပြောင်းညင်သာမူတွေအတွက် အတော်ကိုအံ့သြတုန်လူပ် သွားမိပါတယ်။ ဒါအပြင် မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်း၊ လပိုင်းတွေအတွင်းကပဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် သွေးတွေ၊ ချွေးတွေ ပေးခဲ့ရတဲ့ ရဟန်း၇ှင်လူပြည်သူတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တကြောင်းတလေမှ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရပါတယ်။
ဦးဇင်းတို့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သွေးမြေကျမူတွေ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံရမူတွေဟာ ဒီကနေ့ထိရှိနေဆဲမို့ တိမ်မြူပ်ဖျောက်ဖျက်ထားလို့ မရတဲ့ သမိုင်းတွေပါ၊ ရဟန်းတွေဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရပြီး ပြည်သူ့ဘ၀ကို သိရှိထားသလို လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဖိနှိပ်ခံရမူတွေကိုလည်း စာနာနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်စာသင်သံဃာ တပါးအနေနဲ့ မိမိတာဝန်မိမိ ကျေချင်ခဲ့ တယ်။ ကမ္ဘာကမေ့ပျောက်လုနီးနီးဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ဒီကနေ့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ နေရာယူလာအောင် နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးမူတွေများလာအောင်၊ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ဆွေးနွေးရတဲ့အဖြစ်ရောက်အောင် နောက်ဆုံးကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်နိုင်အောင် စစ်အုပ်စုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခုလို ဆက်ဆံရေး ကိုယ်စားလှယ်ထားပြီး တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုတော့မဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ ဖြစ်လာအောင် ဦးဇင်းတို့ရဲ့ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေရဲ့ သွေးတွေနဲ့ လမ်းခင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မတရားတဲ့ အမိန့်ဟူသမျှတာဝန်အရ ဖီဆန်ကြဆိုတဲ့ စကားကို ကိုင်စွဲပြီးဒါယိကာမကြီး ဒေါ်စုတယောက် ကျန်းကျန်းမာမာမှရှိရဲ့လား၊ အားပေးစကားတွေ ပြောမယ်၊ ဒေါ်စုဆီကလည်းပြည်သူတွေကို ပြောစရာတွေရှိနေမှာပဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဦးဇင်းတို့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေဟာ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က အခက်အခဲတွေအတား အဆီးတွေ ကျော်ဖြတ်ပြီး ဒါယိကာမကြီးထံကို အရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ နဲ့ လာရောက်ခဲ့တဲ့ ဦးဇင်းတို့ကတော့ ဒါယိကာမကြီးထံက အားပေးစကား၊ နူတ်ဆက်စကား တလုံးတပါးမှ မထွက်လာတာကြောင့် အပြန်ခရီးမှာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမူတွေနဲ့ ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
စစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်အား ခန့်အပ်မူကို ကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒါယိကာမကြီးဒေါ်စုရေ…. စစ်အုပ်စုရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဖိနှိပ်ရက်စက်မူတွေကိုလည်း သတိကြီးစွာထားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ဒါ့အပြင်ဦးဇင်းတို့ ရဟန်းသံဃာတွေ ပျောက်ဆုံးနေမူတွေ၊ ရဲဘက်စခန်းကိုပို့ခံနေရမူတွေ၊ အဖမ်းအဆီးအနှိပ် အစက်ခံနေရတာတွေ၊ လူမသိသူမသိ သတ်ဖြတ်ခံနေရမူတွေ ရဟန်းသံဃာအားလုံးရဲ့ ကံကြမ္မာအတွက် ဒါယိကာမကြီးအပါအ၀င် ဦးဇင်းတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့အတွက် ရဟန်းသံဃာတွေရဲ့ အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလေးအနက်ထား စဉ်းစားပေးဖို့ကိုလည်း ဦးဇင်းအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ဒါယိကာမကြီးကို ပါတီတခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာထက် လူထုတရပ်လုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်အဖြစ် အလေးထားပါတယ်၊ ထူထုဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကစပြီး အကြိမ်ကြိမ် တာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က NLD ကို လူထုက တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ဒါယိကာမကြီး လုပ်သင့်တာကတော့ အစိုးရတရပ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ပါ။ NLD ဟာအာဏာရှင်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မလုပ်သင့်ပါ။ သွေးစွန်းနေတဲ့ လက်တွေကို လက်ဆွဲနူတ်ဆက်မူ မလုပ်သင့်ပါ။ ဒါယိကာမကြီးကို အကန့်အသတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကား ပြောဆိုမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ ရိုးသားတဲ့အပြုအမူ မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါ။ အဖမ်းခံရသူတွေ အနည်းငယ်ကို ပြန်လွှတ်ပေးရုံ၊ ဒေါ်စုကိုအရုပ်လေးတရုပ်လို အပြင်ကို ခေတ္တထုတ်ပေးရုံနဲ့ နိမ့်ကျနေတဲ့ မြန်မာလူမူဘ၀တခုလုံး အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ ဦးဇင်းတို့မယုံကြည်ပါ။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ပြတ်သားမူတွေ၊ ရဲရင့်မူတွေ၊ အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးမူတွေ၊ မတရားတာကို ခေါင်းငုံ့မခံတဲ့ အတွေးအခေါ် တွေ၊ ရန်သူအပေါ်မှာ ဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေဟာ ဒါယိကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထံမှာ ရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်း မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၀၇။
Dear National Leader Daw Aung San Suu Kyi,
My name is U Kovida. I wasaBuddhist Student and involved in leading role in the recent Monk and People's demonstration. The reason that I am writing this letter is for the people of Burma as well as your statement.
I was shock to learn your soft line with the SPDC from your statement. It was also tragic to learn that the statement did not say anything about sacrifice of Monk and People in the recent demonstration which was to paveaway for National Reconciliation.
Bloodshed came out from the Monks and People of Burma has been remained in our living history. I very much understand the daily sufferings of the people of Burma as I am among of them as well as understand your suffering. I therefore want to fulfill my duty asaBuddhist Student as about to get attention of International Media on which Burmese affairs was almost noting covered, to receive more pressure from International Community and UNSC, to make the visit of UN Special Envoy possible, to make the SPDC assign the Liaison Minister to start talking with Daw Aung San Suu Kyi. That is all about of sacrifice of the people of Burma.
Holding your motto which is "to fight against any unlawful act asaduty", and having hope that you were well and we would get your supportive words, we managed to come to see you on September 22. But we all were sad because we did not get any word from you. You said that you are ready to cooperate with the military regime and welcome to the establishment of Liaison Minister U Aung Kyi. Please be advice to take extreme cautious about repression and tricks of the military regime. I believe that whatever we do, we including yourself must are to consider the disappearances of monks, monks forced to send to the hard labour camps, mass arrests, clandestine killings, and fates of all people of Burma. I therefore would like you to take these things into your serious consideration.
I respect you as National Leader rather thanaleader of political party. People of Burma have showed enough their desire since 1988. National League for Democracy (NLD) has been given power by people in the 1990 general elections. All you have to do is to form the government.
NLD should not work with the military regime and they should not shake blood-thirsty
hands. You are still under restriction which indicates that the regime has not sincere intention for the real dialogue. Unacceptable. I don't believe that just releasing the few people from the prison, and taking you out from the house arrest forawhile will not bring any improvement for the people of Burma. I truly hope that you have decisiveness, courage, truth loving, never silent on injustice, and never surrender to the enemy that General Aung San had always.
Sanghha Representative Committee
Posted by Nyein Chan Aung at 12:56:00 PM0comments
- Three More Activists Detained in Burma During UN Envoy's Visit, link
- ပြည်တွင်းတွင်လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရူံးမူများရှိနေကြောင်း ပီညဲရိုးထံဗကသ အဖွဲ့ချုပ်စာရေးအကြောင်းကြား link- ဒေါ်စုရဲ့ကြေငြာချက်အပေါ် ပအိုင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ကလက်မခံနိုင်ကြောင်း စစ်အစိုးရသတင်းစာမှာရေးသား link
- ရန်ကုန်မှာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစာရွက်ဝေသူတချို့အဖမ်းခံရ link
- လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်သွင်းသော ဂမ်ဘာရီအစီရင်ခံစာအပေါ် နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်ချက် link
- လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်သွင်းသော ဂမ်ဘာရီအစီရင်ခံစာအပေါ် အန်စီယူဘီသုံးသပ်ချက် link
- ပီညဲရိုးနေပြည်တော်တွင် ၀န်ကြီးအချို့နှင့်တွေ့ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများနှင့် တွေ့ရန်တောင်းဆိုထား link
- မစုစုနွေးအဖမ်းခံရမူနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့အရေးလူပ်ရှားသူများ၏ တုန့်ပြန်ချက် link
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးချက်ချင်းစတင်ရန် လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ မစ္စတာဂမ်ဘာရီတောင်းဆိုlink
- တိုင်းရင်းသားများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျေညာချက်ကို ထောက်ခံ link
- မီဒီယာကို သတင်းပေးသဖြင့် ဇီးကုန်း အန်အယ်ဒီ ဥက္ကဌ ခြိမ်းခြောက်ခံရ link
- UN envoy meets Myanmar junta, link
- U.N. envoy "disturbed" by Myanmar arrest in visit, link
- A UN human rights envoy is due to meet with top Burmese junta officials, link
- UN Special Envoy Tells Security Council of Positive, But Limited Progress in Burma, link
- U.N. human rights envoy Paulo Sergio Pinheiro met with Burmese government ministers, link
News collection - Gambari reported on his trip in Burma to visiting UNSG by phone, Ashin Gambarira was arrested, Rumor claims Su Su Ngwe was arrested
- Burmese Labor Activist Arrested as UN Envoy Visits Military Leaders, link
- ပီညဲရိုးရောက်စဉ် ရန်ကုန်တွင် စစ်သားများရှင်းလင်းနေ link
- အရှင်ဂဘီရဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီ link
- ဆရာတော်ဦးဂဘီရ အဖမ်းခံရ link
- မစုစုနွေးအဖမ်းခံရသည့်သတင်းများပေါ်ထွက်နေ link
- 'Ban Burmese gems, jade', link
- UN rights envoy to meet Myanmar ministers, link
- Burma junta agrees to talk, link
- UN Secretary-General Hopeful After Special Envoy's Briefing on Burma, link
- မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဂမ်ဘာရီ အထွေထွေအတွင်းရေးမူးချုပ်ကို အစီရင်ခံစာတင်သွင်း link
- ပီညဲရိုး၏ဒုတိယမြောက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် အနှစ်ချုပ် link
Posted by Nyein Chan Aung at 9:49:00 AM0comments
ငါ့ဘလော့ run ဖို့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေလိုတယ်…
ငြိမ်းချမ်းအောင်၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇။
၁။ အသက် (၈၈) နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သော “မဟာကဗျာဆရာကြီး” ဟုခေါ်ဆိုသမုတ်ခံရသူ ဆရာ ဒဂုန်တာရာက ၄င်း၏နွေရာသီ စံနန်းရိပ်သာ အောင်ပန်းအိမ်တွင် မောင်သာချိုနှင့် (၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်ပိုင်းတွင် - ပိတောက်ပွင့်သစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇) စကားပြောနေစဉ်.. မောင်သာ ချို၏ “ဆရာ Hip Hop ကြိုက်သလား စိုင်းစိုင်းခမ်းလိူင်တို့ ဘာတို့” ဟူသော အမှတ်မထင် မေးခွန်းကို “ကြိုက်တယ်ဗျ” ဟုမဆိုင်းမတွဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။ ဟစ်ဟော့သီချင်း တော်တော် များများကို ကြိုက်တယ်ဟုလည်း ၄င်းက ထပ်ပြောပြီး.. “စိုင်းစိုင်းတို့က ကာရန်တွေဘာတွေ မလွတ်ဘူးဗျ” ဟုလည်းမိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ခေတ်မီလွန်းပေစွဟုပင် ပြောရမည်လား…။ တကယ်တော့ ဟစ်ဟော့ သီချင်းအများစုမှာ ချောမွေ့ပြေပြစ်လှ၍ နားထောင်ရသူကို ရင်ထဲသို့ လျှောကနဲဝင်သွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဆိုခြင်းကို ငြင်း၍မရနိုင်။ ကျနော်လည်းဤ ကဗျာအား ဟစ်ဟော့ သံပေါက်အတိုင်း ကြိုးစား၍ ရေးစပ်ထားပါသည်။
၂။ အခြေအနေအမျိုးမျိုး၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယူအန်ဖြတ်၍ တတိယနိုင်ငံ ထွက်ခွာ သွားရသူများ၊ ခရီးသွားရင်း၊ ကျောင်းတက်ရင်း အစိုင်လမ်ခံလိုက်ရသူများကို (လုံးဝ) ထိပါးစော်ကားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်တောင်းပန်ပါသည်ခင်ဗျာ။
Posted by Nyein Chan Aung at 1:05:00 AM9comments